Asehon’ny Tetikasa Fakan-tsarin’ny Mpianatra Makedoniana Ireo Toerana Sasany Tamin’ny Ady Lehibe Voalohany sy ny Endriny Ankehitriny · Global Voices teny Malagasy
Asehon'ny Tetikasa Fakan-tsarin'ny Mpianatra Makedoniana Ireo Toerana Sasany Tamin'ny Ady Lehibe Voalohany sy ny Endriny Ankehitriny
Voadika ny 03 Jona 2017 5:36 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, বাংলা, 日本語, русский, Italiano, English
Sarin'ny ankizy roa tao Bitola tamin'ny taona 1917 sy io làlana io ihany manamorona ny renirano Dragor taona 2017. Milanja fiarovan-dohan'ny tafika Frantsay ny iray amin'izy ireo. Nahazoana alàlana.
Nanambatra ireo sary mba hamelomana indray ny fahatsiarovana tao an-toerana nandritra ny Ady Lehibe Voalohany ny vondrona mpianatry ny lisea ao amin'ny faritra atsimon'ny tanàndehiben'i Bitola Makedonia.
Zato taona lasa izay, anisan'ny antsoina hoe Mandan'ny Makedoniana i Makedonia, izay antsoina ihany koa hoe Mandan'i Salonica (aorian'ny Thessaloniki) na Front d'Orient (Manda Atsinanana) amin'ny teny frantsay, izay somary manamorona ny sisintany mifanolotra amin'i Gresy ankehitriny. Nanomboka ny volana Martsa ka hatramin'ny volana Oktobra 1917, ravan'ny daroka baomban'ny fitaovam-piadiana lehibe miisa 13 avy amin'ny Hery Afovoany ny tanàndehibe Bitola izay teo am-pelatànan'ny Mpiaradia ary nahitana ny fampiasana ny etona misy poizina .
Ny taona 2017, nanomana ny fampirantiana ny sarin'i Bitola fahiny sy ankehitriny ny mpianatry ny lisea izay nandray anjara tamin'ny tetikasa mba hanampiana ireo ankizy avy ao amin'ny tanàndehibe maro amin'ny fampahafantarana bebe kokoa momba ny vanim-potoana. Nampitaha ny sarin'ny tanàndehibeny nalaina tamin'ny taona 1917 na 1918 sy ny toerana misy amin'izao fotoana izao izy ireo.
Mampiseho ny fiovan'i Bitola tao anatin'ny 100 taona ireo sary. Nahasarika ny sain'ny media sosialy maro izany rehefa navoaka tao amin'ny Bored Panda ny sasany tamin'izany.
Ankoatra ireo sary [mg], misy ihany koa ny karazana “fahatsiarovana” hafa avy amin'ity vanim-potoana manan-tantara ity toy ny fitaovam-piadiana tsy mipoaka : grenady, tafondro sy baomba izay mbola tsikaritra eny amin'ny faritra. Mbola manohy mangady ireo fitaovana tranainy mampidi-doza toy izany, fara fahakeliny, indray mandeha isan-taona ny mponina .
Fanehoana ny sary natambatra taloha sy ny zava-misy vaovao. Sary avy amin'ny ALDA – Skopje, nahazoana alàlana .
Ahitana vondrona mpianatra hafa avy ao Skopje, Tetovo, Strumica ary Bogdanci ny tetikasa amin'ny ankapobeny, izay niaraka tamin'ireo mpianatra tao Bitola nandray anjara tamin'ny atrikasa mifototra amin'ny fomba fananganana ny fandriampahalemana ary nahita ny sehatra nisy ny ady fahiny tamin'ny alalan'ny fitsidihana tany an-toerana. Nisafidy fomba samihafa mba hanehoana ny zavatra efa nianarany, nanatontosa lahatsary fohy, nanao fanehoana an-tsarintany, ary nanao diarin'ny miaramila ny vondrona tsirairay.
Mahatonga ireo tanora mba ho lasa mavitrika amin'ny fisorohana ny ady vaovao ny fampianarana azy ireo ny horohoro niainan'ny olon-tsotra nandritra ny ady teo aloha. Tena zava-dehibe indrindra izany tamin'ny fotoana mbola nanohizan'ny nasionalista ny fanokafana indray ny ratra teo aloha tamin'ny ady tao Balkan vao haingana , anisan'izany ny ady mitam-piadiana tamin'ny taona 2001 tao Makedonia, ho fanohanana ny fanentanana ara-politika .
Sary mampiseho ireo miaramila Mpiaradia manao diabe tao an-dalamben'ny Bitola zato taona lasa izay. Nahazoana alàlana.
Nahazo alàlana hamoaka ireo sary indray ny Global Voices noho ny Fikambanan'ny Sampan-draharahan'ny Demokrasia ao An-toerana (ALDA) – Skopje , izay nanomboka ny tetikasa niaraka tamin'ny fanampian'ny Masoivoho Britanika ao Skopje. Ahitana ny Profesora Iljo Trajkovski sy ny mpianatra Viktorija Vodilovska, Eva Kraus, Vesna Trajchevska, Marijan Kotevski, Blagoj Janakievski, ary Gorazd Dimovski ny mpandray anjaran'ny tetikasa.
Mirehareha ny olom-pirenena ao Bitola amin'ny fiarovana ny sasany amin'ireo tranobe fahiny , izay naorina nandritra ny fotoana naha renivohitry ny faritanin'ny Fanjakana Ottoman ny tanàndehiben'izy ireo sy toeran'ny masoivoho vahiny samihafa. Natao Sekolin'ny Mozika ny tranobe . Nahazoana alàlana.
Fahiny sy ankehitriny. Ny endriky ny Klioban'ny Tafika naorina tamin'ny taona 1911 tamin'ny taona 1917 sy ankehitriny, amin'ny alàlan'ny sary roa. Nahazoana alàlana.
Ny tapa-tsary mainty sy fotsy etsy ambony mampiseho ny arabe ankilany . Nahazoana alàlana.
Efa namboarina ny sasany amin'ireo trano simba nandritra ny daroka baomba tamin'ny taona 1917 ary mbola mijoro ankehitriny. Nahazoana alàlana.
Tsena fahiny tao Bitola . Nahazoana alàlana.
Manamboninahitra manao fanamiana Britanika sy Serba mandeha ao Shirok Sokak, ny làlana fiantsenana ao Bitola. Nahazoana alàlana.
Trano fahiny tao Bitola. Nahazoana alàlana.
Trano iray ahitana ny sainam-pirenena Britanika zato taona lasa, inoana fa nampiasain'ny tafika . Nahazoana alàlana.
Ankizy maka sary eo anoloan'ny fiangonana St. Dimitri ao Bitola. Nahazoana alàlana.
Manamboninahitra Serba mandeha fiara ao afovoan'i Bitola manamorona ny renirano Dragor. Nahazoana alàlana.
2 andro izayEoropa Andrefana
3 andro izayBelarosia